Ciidamo Kenyaan iska soo dhigay Al-Shabaab oo dilay sarkaal ka tirsan CXD – Warfaafiye:
Ciidamo Kenyaan iska soo dhigay Al-Shabaab oo dilay sarkaal ka tirsan CXD
Ali Mohyadin Jan 12, 2018 0
Wararka ka imaanaya magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal, kadib markii ciidamada Kenya oo isu soo eekeysiiyay Al-Shabaab, wajiyadana soo duubtay ay gudaha magaalada usoo galeen.
CIidamdaan oo ku hubeysnaa ilaa seddax gaari oo kuwa dagaalka ah aya waxaa ka babanayay calanka Al-Shabaab, shaki kadibna waxaa dhex maray iska horimaad ciidamada xoogga dalka oo afarta jiho kaga dhacay ciidamadaasi.
Weerarkaan ayaa waxaa ku dhintay Dhamme Maxamed Aadan Yusuf sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka.
Warar kale ayaa sheegaya in ciidamada Kenyaanka ee iska soo dhigay Al-Shabaab ay si bareer ah u khaarijiyeen sarkaalka ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka.
Kenya ayaa lagu eedeeyay inay sameysatay ciidamo gaar ah oo loogu yeero kuwa la dagaalanka argagixisada, balse u adeegsada inay ku khaarijiso saraakisha Soomaaliyeed ee kasoo horjeeda faragelintooda iyo damaca dhul boobka.